Raashiyaan hariiroo wal-qunnamtii interneetii idiil addunyaa keessaa of baasuuf yaadaa jiraachuun ibsame – Fana Broadcasting Corporate
Raashiyaan hariiroo wal-qunnamtii interneetii idiil addunyaa keessaa of baasuuf yaadaa jiraachuun ibsame
Finfinnee, Gurraandhala 5, 2011 (FBC)- Raashiyaan hariiroo wal-qunnamtii interneetii idiil addunyaa keessaa of baasuuf yaadaa jiraachuun ishee ibsame.
Raashiyaan hariiroo wal-qunnamtii interneetii adil addunyaa irraa of baasuuf kan yaade haala odeeffannoo nageenyaan wal-qabateen ta’uu ibsameera.
Kana irratti hundaa’ee sadarkaa biyyoleessatti dhaabbilee fi lammiilee ishee ragaalee waljijjiiruuf hojimaata isaan dandeesisu irratti qorannoo gaggeessaa kan jirtu yoo ta’u, yeroo dhiyootti yaaliirra kan oolchitu ta’uu dubbatameera.
Guyyaan qorannicha ifa itti baastu ibsamuu baatuus akka lakkoofsa faranjootaa Eebla 1,2019 dura ifa ni gooti jedhameet eegama.
Raashiyaan haala fayyadama interneetii Idil Addunyaa irra hojimaata fooyya’aa ishee gochuu danda’u wixinee seeraa akka lakkoofsa Awurooppaatti bara darbe mana mareef dhiyeessuu ishee gabaasichi yaadachiiseera.
Dhaabbanni Waraanaa Atilaantikii Kaabaa fi michoonni isaa haala fayyadama odeeffannoo nageenyaan walqabatee yeroo adda addaa Raashiyaarratti komii ni dhiyeessu.
Feesbuukiin Ityoophiyaatti sagantaa ragaalee sobaa hir’isu danda’u eegale
Ameerikaan Ityoophiyaa waliin qindoominaan ni hojjetti jedhame